Sida loo doorto telescope: astaamaha, miisaaniyadda iyo khibrada | Saadaasha Shabakadda
Dhamaan dadka jecel daawashada cirka habeenka, telescope-ka wanaagsan waa fikrad fiican. Qalabka indha indhayntu wuxuu leeyahay astaamo kala duwan oo ay tahay in lagu waafajiyo mid kasta. Waxaa jira kumanaan doorsoomayaal ah oo xisaabta lagu darsado iyo moodallo badan oo suuqyada ka jira oo qiimayaal kala duwan leh. Sidaa darteed, halkan waxaan ku baran doonnaa sida loo doorto telescope-ka ka qaybgalka dhammaan astaamaha ay tahay inaad tixgeliso iyo ujeeddada ugu weyn ee aad u adeegsanayso.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa sida loo doorto aaladda telescope ee la xiriirta tayada iyo qiimaha aad u baahan tahay.
1 Sida loo doorto telescope iyadoo loo eegayo miisaaniyadaada
1.1 Telescopes-ka 200 euro ama ka yar
1.2 Telescopes ilaa 500 euro
1.3 Telescopes ilaa 800 euro
1.4 Telescopes laga bilaabo 1000 euro
2 Sida loo doorto muraayadaha aragga iyadoo la raacayo waqtiga fiirsashada
3 Sida loo doorto teleskoob ku saleysan aragtidaada
Sida loo doorto telescope iyadoo loo eegayo miisaaniyadaada
Waxa ugu horreeya ee tixgelinta la siiyaa waa miisaaniyadda. Waa qodobka ugu muhiimsan. Waxtar ma leh haddii aad aqoon dheeraad ah u leedahay daawashada cirka, cilmiga xiddigiska, iwm. Haddii aadan haysan lacag kugu filan oo aad ku iibsato telescope tayo sare leh. Waxaan isku dayeynaa inaan uqeybino teleskoobyada kaladuwan ee naga caawin kara hadba miisaaniyadaha kaladuwan ee aan isku haleyn karno.
Telescopes-ka 200 euro ama ka yar
Waa dhif iyo naadir in aan ka heli karno telescope wanaagsan oo ka hooseeya qiimahan. Waa inaad ka fikirto hadaan soo iibsano Telescope-ka noocan oo kale ah oo aan ogaanno inaad aad u xiiseyso cilmiga xiddigiska, waxaad isla markaaba dooneysaa inaad soo iibsato wax ka wanaagsan oo 200-kan oo waxtar yar lahaa. Halkii, haddii aad keydiso oo aad wax ka fiican iibsato, waad ka faa'iideysan kartaa muddo aad u badan waxaadna ka heli kartaa wax badan maalgashigaaga.
Maskaxda ku hay in sicirkani aanu ku filnayn inuu yeesho aaladda telescope-ka oo dhammaystiran oo leh safar iyo buur. Badanaa waxay leeyihiin indha indheyn liita ama buur deggan. Kuwani waa dhinacyada aasaasiga ah si loo damaanad qaado daawashada wanaagsan ee cirka. Waxaan kugula talineynaa muraayadaha indhaha wanaagsan laakiin waxay qaadataa waqti badan oo dheeri ah si loo bilaabo waa in la arko qaar ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan.
Telescopes ilaa 500 euro
Burburinta miisaaniyad xoogaa macquul ah. Waa koox miisaaniyadeed taas Waxay na siin kartaa farxad labadaba iyo niyad jab weyn. Tiradaas ma heli karno xoogaa qurux ah iyo waxyaabo aad u xun. Tani waa sababta ay tahay inaad u ogaato sida wanaagsan ee loo doorto. Qiimaha noocan ah waxaan ka heli karnaa teleskoobyo hagaagsan oo laga bilaabi karo cilmiga xiddigiska oo xasilloon isla markaana leh fur ballaaran. Badanaa way fududahay in la maareeyo, in kasta oo ayan haysan mootada. Kuma haboona astrophotography oo xoogaa culus.
Waxaan sidoo kale heli karnaa qaar quruxsan oo hufan illaa iyo inta aan sharad ku dhigeyno biraha azimuth iyo teleskoobyada tayada leh.
Telescopes ilaa 800 euro
Waa mid ka mid ah miisaaniyadaha ugu habboon ee loogu talagalay kuwa ku cusub cilmiga xiddigiska. Waxaan ku soconaa qiime kala duwan oo aan ka heli karno dhowr qalab oo aad u tayo wanaagsan. Marka la eego noocyada sii kordhaya ee moodooyinka, go'aanka wuxuu ku xirnaan doonaa wax badan oo ku saabsan dookhayaga, danahayaga iyo doorbidkayaga. Waa qiime qadar yar oo qatar ah oo aan ka heli karno qalab aad u wanaagsan laakiin kuwa kale oo aan la qabsanayn waxa aan raadineyno.
Telescopes laga bilaabo 1000 euro
Tani waa halka ay kuli caalamiyadu ka furmi karto. Waxaan ka heli karnaa buundooyin tayo sare leh oo noo ogolaanaya inaan leenahay dhowr teleskop oo aan ku isticmaali karno hal buur. Xitaa inaad awood u yeelatid inaad kubilaabatid aduunka astrophotography raaxo aad uwayn.. Waxaan sidoo kale heli karnaa teleskoobyada qaarkood oo lagu shaqeyn karo mobilada oo naga tagaya iyadoo afkeennu furan yihiin.
Sida loo doorto muraayadaha aragga iyadoo la raacayo waqtiga fiirsashada
Mid ka mid ah dhinacyada aasaasiga ah ee lagu barto sida loo doorto telescope-ka waa waqtiga aad awoodi doontid inaad u heellan tahay ilaalinta cirka. Haddii aad sameyn doontid fiiro gaaban oo goosgoos ah, ma mudna in waqti badan la geliyo. Dhanka kale, haddii aad qaadan doontid habeenno indho indheyn ah haddii ay wanaagsan tahay inaad haysatid aaladda teleskoob wanaagsan. Diyaar u ahaanshaha inaad dhowr saacadood kormeer ku qaadato ma aha wax la mid ah sameynta indho indheyn deg deg ah oo laga sameeyo guriga meel u dhow si loo arko xiddigaha waaweyn.
Aynu u malayno inaan laba saacadood u hurno hiwaayadan. Micno malahan in la helo teleskoob qaybo badan ka kooban kuwaas oo leh buundo iskudhaf ah ama waqti dheer ku qaadaneysa la qabsiintooda. Teleskop-yadaani waa kuwo aad u adag oo u baahan in la galiyo saldhigga maadaama ay qaybo badan leedahay. Sidaa darteed, waxaan qaadaneynaa waqti aad u dheer si aan u kala furfuro oo aan u kala furfuro iyaga maadaama aakhirka aynaan ku raaxeysan doonin kormeerka ku filan.
Haddii aan ilaalin doonno waqti yar, waa inaan waqtigaas in badan bilowno. Waxaa ugufiican in la helo teleskoob gacan-ku-hayn ah oo leh altazimuth mount. Dareenkan, sumadda Dobson ayaa ah kuwa ugu weyn ee ku guuleystey fagaarahan.
Sida loo doorto teleskoob ku saleysan aragtidaada
Maskaxda ku hay haddii aad jeceshahay indho-indheyn dhaqameed ama farsamada casriga ah. Waxaa jira kuwa doorbida inay ku noolaadaan cilmiga xiddigiska qaab dhaqameed sidii ay sameeyeen cirbixiyeennadii waaweynaa ee hore. Xaaladdan oo kale, oo leh teleskoob gacmeed iyo jaantusyada qaarkood ee samada ayaan sanado ku qaadan karnaa ilaalinta cirka. Dadka qaarkiis waxay doorbidaan inay ku tiirsanaadaan tikniyoolajiyadda waxayna doorbidaan fikradda ah in telescope-ka laga isticmaalo taleefanka gacanta isla markaana la daawado sawirrada kombiyuutarka.
Waan heli karnaa walxaha samada gacanta ku ha ama samee teleskoobku inuu noo qabto shaqada oo dhan. Dhibaatada tiknoolajiyada ayaa ah inay noqon karto cunsur khiyaano leh. Adeegsashadeedu waxay naga yeeli kartaa xoogaa raaxo leh waxayna naga dhigaysaa inaanan cirka baran ama aannan aqoon sida loo maareeyo teleskoobka kaligeen. Dhinaca kale, Teleskoob gacan ku sameys ah ayaa ka dhigi kara waxyaabo xoogaa dhib yar marka hore, laakiin waa in la aqoonsadaa in helitaanka galax sannado iftiin ah oo naftiisa ah sida caadiga ah ay soo saarto farxad aad u wanaagsan iyo is-garasho.
Labada isku-dhafan waa la aqbalay laakiin way adag tahay in la isku daro hal koox. Waa inaan dooranaa mid ama mid kale. Haddii miisaaniyadda aan haysanno aysan aad u badnayn, ma haysan doonno wax aan ka ahayn in aan isticmaalno telescope gacanta lagu qaato. Haddii miisaaniyaddeennu ka badan tahay, waxaan mar hore dooran karnaa raaxo dheeraad ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida loo doorto telescope-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Sida loo doorto telescope-ka